Boqonnaa qabsoo Oromoo fi tarkaanfii jijjiirramarratti mariin gaggeeffamaa jira – Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
On Apr 18, 2021 223
Finfinnee, Eebila 10, 2013 (FBC) – Boqonnaa qabsoo Oromoo fi Tarkaanfii jijjiirramarratti Waajjirri Preezdaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa waltajjii marii idilee gaggeessaa jira.
Waajjiri Preezdaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa waltajjii marii idilee mataa dureewwan adda addaa irratti xiyyeeffatu gaggeessuu eegaleera.
Waltajjiin marii jalqabaa mata duree “Boqonnaa Qabsoo Oromoo fi Tarkaanfii Jijjiiramaa“ jedhuun eegalameera.
Ga’ee guddaa Uuumatni Oromoo ijaarsa biyyaa, birmadummaa biyyaa kabachiisuu, mootummaa ammayya’aa ijaaru keessati taphachaa turee fi Adeemsa qabsoo Oromoo jalqabaa hanga ammaa jiru keessatti jabinoota fi ciminoota turanirratti mariin gaggeeffamaa jiraachuu himameera.
Riifoormiin gurguddaan jaarmiyaalee diimookiraasii akka Boordii Filanoo Biyyoolessaa, Komiishinii Mirga Dhala Namaa Itoophiyaa fi Jaarmiyaalee nageenyaa keessatti gurguddaan geggeeffamu maricha keessatti ka’eera.
Aadaa marii fi wal dhageeffachuu daraan cimsuu, Dudhaalee obbolummaa, walii-dhiisuu fi waloomaa dagaagsuun barbaachisaa ta’uu himameera.
Akka waajjirri Dhimmoota Kominiikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa beeksiiseetti Waltajjiin marii kun mata dureewwan siyaasa, hawaasummaa fi diinagdee uummata Oromoo irratti xiyyeeffatan mariidhaaf kan dhiyaatan ta’uu ibsameera.
Feesbuukii keenyan dabalata odeeffannoo waqtaawaa argachuuf;
Bulchiinsi magaalichaa dhaabbilee tola ooltootaaf kennaa Ayyaana Iid Al Faxirii laate
Manneen marichaa ergaa baga geessanii Ayyaana Iid Al Faxirii waggaa 1442ffaa dabarsan
Ayyaanni Iid Al Faxirii waggaa 1442ffaan karaan akka kabajamu qaamni hundi ga’ee isaa…
Dooktar Abiy ergaa baga geessanii Ayyaana Iid Al Faxirii dabarsan
Ayyaanni Iid Al Afxiraa waggaa 1442ffaan Kamisa kan kabajamu…
Yakka naannoo Tigraay magaalaa Aksumitti raawwatame…
Ramadaanni mallattoo tokkummaa jabaadha – Obbo…
‘Milkii filannoo marsaa 6ffaaf gumaacha kan qabu ummata…
Bulchiinsi magaalichaa dhaabbilee tola ooltootaaf kennaa…
Manneen marichaa ergaa baga geessanii Ayyaana Iid Al Faxirii…
Ayyaanni Iid Al Faxirii waggaa 1442ffaan karaan akka…
Oduu biyya keessaa6794